Dogongorri Seenaa akka hindabalamne: Manneen kun kan ijaaramaniin jiran lafa qotee bulaa Oromoo naannaea Finfinneetti argaman irrattu ijaaramee argame. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDogongorri Seenaa akka hindabalamne: Manneen kun kan ijaaramaniin jiran lafa qotee bulaa Oromoo naannaea Finfinneetti argaman irrattu ijaaramee argame.
Dogongorri Seenaa akka hindabalamne: Manneen kun kan ijaaramaniin jiran lafa qotee bulaa Oromoo naannaea Finfinneetti argaman irrattu ijaaramee argame.
Dogongorri Seenaa akka hindabalamne.
Manneen kun kan ijaaramaniin jiran lafa qotee bulaa Oromoo naannaea Finfinneetti argaman irrattu ijaaramee argame. Iddoon isaa gooroo fi Tulluu diimtuu giddutti argama. naannoo gamoo kanaa xaafiin margu amayyuu jiruu qotee bulaa kanaa bira darbee Warra Finfinnee jiraatan hundaaf ni ga’a. Bakki manneen kun jiru haaluma kamiiniyyuu qaama magaala Finfinnee ta’uu hindanda’u. Manneen achitti ijaarame kun duursa kennamuu kan qabu qotee bulaa lafa kanarraa buqqa’ee fi ijoollee isaaniriif ta’uu qaba. Diimograafin naannoo sanii kan jijjiiru ta’uu hinqabu. Dhimmi kun ifeegannoo guddaadhan ilaalamuu qaba.
Finfinneen magaalaa teessoo Tokkummaa Afrikaa fi Mootummaa RFD #Itoophiyaa taate dha. Handhura Oromiyaa magaalaa guddoo Oromoo-Oromiyaa ta’uun ishiis shakkii tokkollee hin qabu.
Finfinneerratti gaaffii mirga abbaa biyyummaa qaamni seenaanis ta’ee seeraan dhiyeessuuf mirga qabu tokko hin jiru. LMirgi abbaa biyyummaa Oromoo garuu Finfinnee irratti/keessatti takkaa kabajamee hin beeku. Hariiroon Finfinnee fi Oromoo ammayyuu kan firummaa odoo hin taane kan diinummaa ta’uu namuu Ni arga.
Mirga abbaa biyyummaa yoo jennu, Finfinneen daangaa murtaa’aa beekkamaa kan qabdu taatee itti waamamni bulchiinsa ishii Caffee Oromiyaa fi Mootummaa Federaalaa (dhimmoota aangoo Mootummaa Federaalaa wajjiin walqabatan hojiirra oolchuuf qofa) akka ta’u gochuudhaan lammiileen biyyatti hundi walqixxummaa jaalalaan akka keessa jiraatan (akkuma Adaamaa, Jimmaa, Amboo…) dandeessisu dha malee akka ololtooti tokko tokko jedhan uummata kaan keessaa baase magaalaa Oromooti qofti keessa jiraatan gochuu miti. Oromoon hammataa dha malee hammaataa miti.
Wanti hubatamuu qabu tokko jira. Hanga Oromiyaa jalatti deebitutti Finfinneen babal’achuu hin qabdu daangeffamuu qabdi ilaalchi jedhu bu’urarraa dogoggora. Finfinneen Oromiyaa jalattis taatee haaluma kamuu keessatti qonnaan Bulaa buqqistee babal’achuu hin qabdu. Daanga’uu qabdi. Magaalaa tun lafa bal’aa qabdi, lafuma kanarratti olguddachuu dandeessu. Kaayyoon keenya qonnaan Bulaa keenya haaluma kamuu keessatti buqqisaa balaaleeffachuu ta’uu qaba. Magaalaa Oromiyaa jalatti Bulaa jiranis taanaan akka feeteedhaan babal’achuu hin qaban. Daanga’uu qabu. Lafti dhiphoodha walis hin horu Uummatni garuu hoggayyuu ni dabalaa. Kanaafuu, lafa qusannoo guddaadhaan fayyadamaa feesisa.
Dhimma Finfinnee kanaan dhimma adda bahee hin ilaalamne kan biraa imaammata magaalaa fi imammaata afaanii biyyattiiti. Finfinneen guutuutti Oromiyaa jalatti osoo galtees rakkoon imaammata magaalaa fi afaanii biyyattii qabdu hanga hin hiikamnetti, mirgi ofiin bulchuu, aadaa fi seenaa ofii dagaagsuu fi mirgi abbaa biyyummaa guutuutti kabajamuu hin danda’u. Dhimmootni kana fakkaata gaaffilee Finfinnee wajjiin walqabatanii ka’uu qabanii dha.
Gamoowwaan magaalaan Finfinnee daangaa ceete seeraan ala jaarte kana ni kennina jechuun Master Pilaanii hojirrra oolchuudha